It sees a murderous Marxist regime, Derg, back to Ethiopia through Abyot Kasaye | Kichuu
Posted on June 4, 2020 by kichuu_admin
Gurbaan kun Qananii Lulluu jedhama. Kaleessa waaree booda Finfinnee, Boolee Bulbulaatti konkolaataa isaa keessatti rasaasaan ajjeefame.
Lubbuun isaa nagaan haa qananiitu!!
#አያንቱ_ጀለታ ትባላለች ወላጋ ለእራፍት ቤተሰብ ጋ ቆይታ ወደ ስራዋ ቦታ ነጆ ከተማ መመላስ ላይ እያለች ነው በአብይ አህመድ የሚመራው የነፍጠኛ ስራዊት አፍነው ወስደዋታል
Ayyaantuu Jaallataa Najjoo irraa gara Finfinnee deemaa utuu jirtuu, Biilaatti waraanni mootummaa konkolaataa keessaa buusanii mana hidhaa galchan.
Girmaa Fiqaaduu kan jedhamu waliin qabanii kaampii waraanaa Biilaa galchan. Ergasii eessa akka jiran hin beekamu.”
Oduu Gaddaa: Miseensaa fi Kore hoji-raawwachiiftuu ABO Waajjira Boolee kan ta’e, Dargaggoo Baqqalaa Bidiraa, halkan edaa Waxabajjii 03, 2020 shiftoota Mootummaatiin ajjeefame.
Dargaggoo Baqqalaa Bidiraa kan ajjeefame Manasaa Boolee Naannoo Mariitti argamu keessatti ta’uun beekameera. Dargaggoo Baqqalaan yeroo darbe Buraayyuu bakka Jaal Abdiifaa dubbisuuf deemanitti Boonsaa Bafiqaaduu faana hidhamee dhiheenya kana wabiidhaan gadi lakkifame.
Badiin Baqqalaan ittiin ajjeefame Miseensummaa ABO fi hojii dhaabni isaa itti kennu dammaqinaan rawwachuu isaati.
Lubbuu Baqqalaaf jannata hawwaa; maatii, firoota, Jaallan Qabsoo isaa fi Uummata Oromoo maraaf jajjabina jenna.
Maqaan isaa Abbaa Gadaa Jaldeessaa Guyyoo Kunee (Dr) jedhama. Gadaa Booranaa kan akka Yaa’aa Koonnituutti gogeessa Adii Dooyyoo ykn luba Kuraa Jaarsoo irraa baallii fuudhuudha. Yeroo ammaa raaba dooriiti. Eegaa guyyaa 3n dura magaalaa Yaaballootti hidhamee hanga ammaa gaaffii malee mana hidhaa jira. Ilmaan Abbaa Gadaa jechaa Gadaafi Doorii hidhaa jiru bilxiginnaan.
Barsiisaa University Madda Walaabuu #Abdii_Baalee fi Miseensi ABO kan ta’e jaal #Dachaas_Roobaa magaalaa Roobee keessa qabamni Goobba mana hidhaa Gannaaletti eega hidhamanii batii tokko dabree jira. Waraannii Bilxiginnaa Jaal Dachaas Roobaa halkan halkan gadii baasanii akka tumanis isaanuma irraa mirkaneeffanne jirra. Sabboontota Oromoo badii tokko malee mana hidhatti Guuruun Qabsoo Oromoo duubatti deebisuu hin danda’amu. Kanaaf jara tana nuuf hiika.
1 thought on “It sees a murderous Marxist regime, Derg, back to Ethiopia through Abyot Kasaye”
jogir Abaseena on June 4, 2020 at 4:11 pm said:
Kana boda motuummaa kanarra waantti egamu hinjiru.Duraanu mataasaanii debisan of ijaarufii malee gaffiifi qabsoo Oromoo bakkaan gahufi miti.Amaluma isaani kaleesaa ofii balleesani kan biraatti qabatani,gara partii mormiitootaatti qabachuun,hidhuuniif gidirsun isuuma kaleesa baratani hardhasa dalagaa jiru.Hama bikkumsa saaniitu hamma kana.Hatuufii samtuun walgesee akkuma kan walfakkaattu guza waliif baati jedhan walgurratanii tayiitaatti bahanii samiichaaf ajjechaa ilmaan oromoofi saboota cunquurfamoratti raawatu.Kanaaf sabbontoota Oromoo adamsanii ajjesuu.Gochii kun namnii sabboonaa ta`e hunddii isaaniif diina.Kanaaf adamsanii kan argan rasaasaan kuffiisu.Hamuma narukutanan jabaadha jete mismirii.kanafi qabsoon Oromoo hammuuma bulu faanasaa gad jabeesa firaa fi alaga addaan baafachaa xaliilaha Dema.kanaaf kufaatiisaanii gabaabsachaa demaa jiru.Lubbuun darbaa jiru qabsoo Oromoottii sumuda biliisummaa maxansaa galma gahisa qabsoo oromoo saffiisiisa.Isaan qabsoo kanaaf lubbuu sanii kenan,dungoo qabsoo dhaloota dhaalchiisanii darban malee hin dune.Kanaaf Bollaa sanii daadhiin hagutu jena.Harkkii dhiga kana dhangalaaseemoo turee bula malee haqaa jalaa esuumatuu hin bahu.Jabaadhaa sabakoo,yeroo bari`uuf jeedhu hin dimimiisaaha.